Lapho ipulatifomu yohlobo lwe-crank-lifting iphakanyiselwa kunoma yisiphi isikhundla, ingasebenza ngenkathi uhamba. Inesakhiwo esihlangene nokuqondisa okuguqukayo. Ububanzi bomhlabathi wayo bungaqinisekisa ukuthi imishini ingena ephaseji elincane nezindawo zokusebenza eziminyene. I-unit yamandla yokulinda, ukusethwa kabusha kwesikhulumi sokusebenza, imodi yokuhamba elula, ingadonselwa kunoma iyiphi indawo. Iphaneli yokusebenza elula ukukhonjwa, ukuvikelwa kokuphepha okuningi kwemishini, kagesi kanye nokubacindezela, uhlelo oludidiyelwe oluhlanganisiwe lwe-hydraulic system ehlanganisiwe.
hlela Ukuphakanyiswa kwengalo crank yilezi: ukuzihambela ngokwakho kukadizili, ukufaka i-trailer, ukudonsa ngesandla, ukufakwa kwebhethri nokufakwa emotweni.
Imoto yokusebenza yasemoyeni esetshenzisiwe isetshenziswa kabanzi ekufakweni, ekulungisweni nasekukhuphukeni embonini enjengokuphathwa komasipala, amandla kagesi, amalambu emigwaqo, ukukhangisa, ukuxhumana, ukuthwebula izithombe, izingadi, ezokuthutha, amatheku, izikhumulo zezindiza namachweba, amabhizinisi amakhulu ezimboni nezimayini. Ifanele izindawo ezahlukahlukene ezimangelengele enkundleni, futhi inezinhlobo eziningi zemisebenzi yesikhala. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukwakhiwa, ukwakhiwa kwebhuloho, ukwakhiwa kwemikhumbi, izikhumulo zezindiza, izimayini, amachweba namachweba, ukwakhiwa kwezindawo zokuxhumana namandla, kanye nezikhangiso zangaphandle. Ukuphakanyiswa kwengalo kadizili: Akudingi ukunikezwa kwamandla wangaphandle, futhi ilungele imisebenzi yokwakhiwa okuphezulu endaweni ephakeme. Isebenzisa amandla enjini kadizili ukushayela ukuhamba nokuphakamisa, ngamandla amakhulu nesivinini sokuhamba ngokushesha. Ukuphakanyiswa kwengalo ye-trailer: Ingaphanyekwa emotweni, ivumelaniswe nemoto, ilungele imisebenzi ephakeme kakhulu ensimini. Indlela yokuphakamisa: 1. Sebenzisa ugesi we-380-220V. 2. Kuyinto engathandeki ukusebenzisa amandla kagesi. Ungasebenzisa ibhethri ukushayela ilifti. Ukubukeka okuhle, ukuhamba kalula. Ukuphakanyiswa kwengalo eyakhiwe ngemoto: Faka okuphakamisa ingalo emotweni bese usebenzisa amandla emoto ukushayela ilifti. Ilungele umsebenzi wasemoyeni webanga elide.
(1) Uhlobo olusha lwe-chassis ekhethekile yokuzihambisa ngamandla kagesi. Imoto yesikhulumi esizimele yodwa ephakamisa ipulatifomu enamalungelo empahla yengqondo ezimele ngokuphelele iyakhiwa. Yamukela ubuchwepheshe bokuhlanganiswa kwe-electro-mechanical-hydraulic, ukwakheka kokwethembeka nokuklanywa okusizwa ngamakhompiyutha, futhi yathuthukisa ngempumelelo idrayivu yokushayela ngokugcwele, isisindo esikhethekile esizimele, okuyisipiliyoni Esikhathini esedlule, umsebenzi wasekhaya wasendlini ophakamisa izimoto zepulatifomu wawungasebenza kuphela zamukele imikhawulo yokwakhiwa kokushintshwa kwesisisi sezimoto noma ama-cranes.
(2) Ukushayela ngomthwalo nokuzinza okuhle kokusebenza. Isakhiwo se-chassis sinqamula emibonweni nezindlela zokwakha zendabuko, futhi sinciphisa ukuphambuka kwesikhungo samandla adonsela phansi ngokwandisa ukwakheka okuphelele nokusatshalaliswa komthwalo wesikhulumi sokugibela. Isakhiwo sephuzu le-hinge eliyindilinga elihlukile eliyingqayizivele liyamukelwa, futhi izinhlobo ezahlukahlukene zamamojula we-counterweight zisethwe ngokufanelekile ukuze zilinganise kahle i-torque esebenzayo. Ukusetshenziswa kohlaka lwe-H olumise okwe-cross-section oluyindilinga oluhlanganayo lwe-H kanye namathayi werabha aqinile athwala kakhulu kukhulisa ukuqina kwento yonke ye-chassis, kuqinisekisa ukusimama kwawo wonke umshini wokushayela nokusebenza kwenqubo yokusebenza, futhi kuqaphele ukusebenza kwendawo ephakeme kakhulu ukusebenza ephakamisa yesikhulumi iloli umthwalo.
Uwoyela wokubacindezela wakha ingcindezi ethile ngepompo ye-vane, bese ungena ekugcineni okuphansi kwesilinda se-hydraulic ngokusebenzisa isihlungi sikawoyela, i-valve yokuguqula amandla kagesi yokuqhuma, i-throttle valve, i-hydraulic control check valve, ne-valve valve, ukuze i-piston isilinda ye-hydraulic iya phezulu futhi iphakamisa isisindo. Amafutha abuya ekugcineni okuphezulu kwesilinda se-hydraulic abuyiselwa ethangini likaphethiloli ngokusebenzisa i-valve eguquguqula ugesi evutha ugesi. Ingcindezi elinganisiwe ilungiswa nge-valve yokuchichima, futhi inani lokufunda le-gauge yengcindezi liyabonakala nge-gauge yengcindezi.
I-piston ye-hydraulic cylinder iya phansi (okungukuthi, isisindo sehla). Uwoyela wokubacindezela ungena ekugcineni okungenhla kwesilinda se-hydraulic ngokusebenzisa i-valve eguqula amandla kagesi wokuqhuma ugesi, bese kuthi uwoyela wokubuyisa ekugcineni okuphansi kwesilinda se-hydraulic ubuyele ethangini likawoyela nge-valve yebhalansi, i-valve yokulawula i-hydraulic valve, i-valve mpintsha, kanye ne-valve yokuguqula i-electromagnetic reversing valve. Ukuze wenze izinto ezisindayo ziwe kahle futhi amabhuleki aphephile futhi athembekile, kufakwa i-valve yokulinganisa kulayini wokubuyisela uwoyela ukulinganisa isekethe nokugcina ingcindezi ukuze ijubane elehlayo lingaguqulwa isisindo. I-valve mpintsha ilungisa izinga lokugeleza futhi ilawula isivinini sokuphakamisa. Ukuze ibhuleki liphephe futhi lithembeke, futhi livimbele izingozi, kufakwa i-valve yendlela elawulwa ngogesi, okusho ukuthi, ilokhi ye-hydraulic, eyenzelwe ukuqinisekisa ukuthi ingazivaleka ngokuphepha lapho ipayipi le-hydraulic liqhuma ngengozi. Kufakwa i-alamu esebenza ngokweqile yomsindo ukuhlukanisa ukulayishwa ngokweqile noma ukwehluleka kwemishini.
Ngokuthuthukiswa kwesayensi yezenhlalo nobuchwepheshe, ama-elevator e-aluminium alloy asetshenziswa kakhulu. Noma ngabe kwakhiwa, ubunjiniyela, noma impilo yabantu yansuku zonke, amalifti wokubacindezela ahlukaniseki. Amabhizinisi amaningi alibambile leli thuba lebhizinisi lokutshala imali emafektri nasekuphakamiseni izinkampani zemishini. Ngemuva kwalokho ime njengamahlumela oqalo emadolobheni amakhulu ezimboni, kepha imboni yemishini yokuphakamisa isashisa kakhulu futhi ayitholakali. Kungabonakala ohlangothini ukuthi ukuthuthuka okusheshayo komphakathi kuqhuba ukuthuthukiswa komkhakha wonke nezidingo zabantu, kepha njengomthengi Ungayikhetha kanjani imishini yokuphakamisa enhle emikhiqizweni yenkampani sekuyisihloko esibalulekile namuhla.
Eyodwa: Lapho uthenga imishini yokuphakamisa, awukwazi ukuyithenga ngokungaboni. Kuyadingeka ukwenza ucwaningo olwanele lwemakethe nokuhlolwa kwensimu ukuthola isilinganiso senkampani nokwethembeka kwayo. Lokhu okokuqala nokuphambili. Izinkampani eziningi ezincane emakethe zisika amakhona ukuze zifune udlame, ngaleyo ndlela zinciphise kakhulu ikhwalithi yemikhiqizo yokuphakamisa. Yize bezothengisa ngemali ephansi kakhulu, lolu hlobo lwemishini aluthathi isikhathi eside futhi lunobungozi obukhulu. . Ngakho-ke, njengomthengi, umuntu akanakufisa intengo encane futhi abangele ukuzisola okukhulu nakakhulu.
OkubiliNgokuya ngolwazi olucwaningile, khetha umshini wokuphakamisa onenani lentengo / ukusebenza okuhle. Kufanele ukhethe kusuka kumapharamitha alo wezobuchwepheshe, ukusebenza nokusebenza okunhlobonhlobo. Imvamisa, kunezinhlobo eziningi zemishini yokuphakamisa i-aluminium alloy, kufaka phakathi (amalifti afakwe emotweni, amalifti wohlobo olungaguquki). Amakheshi, amapulatifomu wokuphakamisa ama-hydraulic, amalifti wesikele, njll.) Ngalinye linamapharamitha wobuchwepheshe ahluke kancanyana nokusetshenziswa, kepha kukhona nokufana okuningi emisebenzini. Ngakho-ke, njengekhasimende, kufanele uthenge ngenhloso, okungukuthi, wena Ngabe ufuna ukuthenga umshini wokuphakamisa, nokuthi yiluphi uhlobo lomshini wokuphakamisa ongahlangabezana nezidingo zakho futhi osetshenziswayo okuningi.
AbathathuIphuzu lokugcina ukuthi ngemuva kokufika kwemishini, lapho uvula ibhokisi ukwamukelwa, hlola ukuthi ngabe imininingwane yezobuchwepheshe engahleliwe iphelele yini, noma ngabe izesekeli ezingahleliwe, amathuluzi, nezinsiza ziyahambisana yini nohlu, noma ngabe okokusebenza nokonakele, kunesici, njll., bese wenza ukurekhodwa kokwamukelwa kokuqaqa.
Ukuzishayela okuzenzakalelayo Ukuphakamisa umsebenzi wasendlini nangaphandle. Ngokuzihambela, imilenze ezisekelayo, ukusebenza okulula, okulula ukuyisebenzisa, indawo yokusebenza enkulu, ikakhulukazi, ingawela isithiyo esithile noma ilifti ingenziwa kuzimpawu zomsebenzi wasemoyeni onamaphoyinti amaningi. Isetshenziswa kabanzi emigwaqeni, emachwebeni, ezinkundleni zemidlalo, enxanxatheleni yezitolo, ezindaweni zokuhlala, emafemini nasezindaweni zokusebenzela kanye nokusebenza okukhulu. Amandla angakhetha injini kadizili, ibhethri, idizili esebenza kabili.
Ukuphakama Kweplatform (m)
Ubukhulu obuvundlile (m)
Amandla epulatifomu (kg)
I-5100 × 2200 × 3300
Ijubane lokuhamba (km / h)
Langaphambilini Phakamisa isigaba
Olandelayo: Aluminium Ingxubevange Phakamisa
Ukucacisa iBoom Lift
Ukucaciswa kwe-Boom Lifts
Ukuziphakamisa Okuzenzakalelayo kweDrayivu